SADAQO KU BIXI SIYAASADDA:
Sadaqada iyo Siyaasaddu xiriir wey yeeshaan, taasna waxaan ku ogaanay Sadaqooyinka laga soo uruuriyo Shucuubta Carabta ee looga soo qaaday in loogu gargaarayo dhibana-yaasha R/Falastiin, waxaa lacagtaas jeebka ku shubta Hogaanka Siyaasadeed ee R/Falastiid, laakiin lacaghaas ma gaartaa shacabka Falastiin, waxaa ka jawaabi kara shacabka hantidaas magacooda lagu soo uruurshay.
Falastiin kaliya ma’ahan wadamada Sadaqado ku noolka ah, ee waxaa la mid ah wadan kasta oo dhaqaala ahaan liita, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ku nool Sadaqada laga uruursho wadamada Carabta oo ay dowladuhu ama shucuubtu bixiyaan, lacagahaas waxaa waayadii hore lagu soo shubi jiray hogaamiye-kooxeedyo aad ugu xeel dheeraa sida loo shaxaado Carabta, laakiin goortii lagu soo dhisay Jabuuji D.K.G. ah, Jabuutina ay xubin ka tahay Jaamacadda Carabta iyo Masar oo Siyaasad ahaan u taageertay D.K.G. ah ayaa sabab u noqday in dhamaan Sadaqooyinkii la siin lahaa bulshada Soomaalida la soo mariyo D.K.G. ah. Su’aashuse waxay tahay lacagihii Carab laga soo u ruurshay ee gacanta D.K.G. ah soo galay maxaa ka soo gaaray Bulshada Soomaaliyeed? Waxay ila tahay ninkii damcaa inuu ka jawaabo su’aashaa waxaa looga baahan yahay cadaymo la taaban karo.
Aan iska dayno baaritaanka ah xagey martay lacagihii Carabaha laga soo qaaday, aan ka hadalno hadda maxaa horyaalla D.K.G. ah oo xanibaadyo dhaqaale ah, D.K.G.ah waa dowladdii maxaafisha aduunka ku soo celisay Calankii Soomaaliyeed, waxay sabab u noqotay in Soomaaliya mar labaad ay cod buuxa uga hadasho golayaasha aduunka, waxaa dib loo maqlay Madaxweynihii Soomaaliya, R/Wasaarihii Soomaaliya, Afhayeenkii Baarlamaanka, iyo magacyo kale oo Dowladeed, mudooyin-kaan danbe Jornaalada Caalamku wey badaleen luqadihii hore ee ay u isticmaali jireen marka ay ka hadlayaan Soomaaliya.
Waxaa la yiri haddii D.K.G. ahayd ee Sadaqooyinka badan ka soo uruursatay Caalamka Carabta oo la sheegay lacago aad u farabadan iney heshay ayaa maanta awoodi la’ iska bixinta kiradii Gawaaridii u kiraysnaa xubnaha Barlamaanka K.M.G.ah, waxaa taa ka sii daran iyadooba Albaabada loo laabay halkii ay ku shiri jireen kadib goortii ay kiradii iska bixin waayeen, qisadan oo maalmo sii horeysay dhacaday waxay marqaati cad u tahay halka ay D.K.G. ah dhaqaale ahaan marayso, muddo aad u sii fog ayey ahayd markii ay Jornaalada Muqdisho qaarkood qorayeen in gaadh-kii Madaxtooyada D.K.G. ah ay gadoodeen oo ay shaqo ka fariisi sameeyeen iyagoo markaa ku andacoonayey in aanan la siinin Mishaaraadkii ay xaqa u lahaayeen muddo dheer, hadaba is weydiintu waxay tahay Dowlada iska bixin la’ Kiradii Waardiyihii Madaxtooyada sidee ayey waxa ku gaarsiin kartaa Shacabka Soomaaliyeed?.
Sabab kasta ha keentee waxaa hadda muuqata in D.K.G. ah dhibaatada haysata aysan ku koobnayn khilaafka soo kala dhexgalay Sadax nin ee ugu sareeya Hogaanka D.K.G. ah, ee waxaa taa uga sii daran jeeb marnaanta ku dhaw iney shiiqdo Dowladu, waxay dadka qaar qabaan haddii ay Dowladu lacag fiican haysan lahayd khilaafka u dhaxeeyaa intaa ma sii dheeraadeen ee waa lagu kala af xishoon lahaa.
Aniga oo aad ugu wareersan oon ka qancin sababta keenta dhaqaale xumida intaa la’eg ayaan hadana meel fog iska dhigay baaritaanka arintaa, wey jireen Saxafiin Soomaaliyeed oo mar sii horeysay balan qaaday iney dabagal ku samayn doonaan dhaqaalihii soo galay D.K.G.ah iyo halkii ay ku kala baxday, taasna waxba kama soo naasa cadaan, waana muuqatay inaan laga miro dhalineynin, sababtoo ah mar haddii aysan lahayn Dowladu Hay’ado koontaroola dhaqaalaha dalka ama xitaa Dowlada wey adag tahay in raad raac lagu sameeyo, ma’ahayn lacagihii Dowlada soo gaari jiray kuwo qaabkii Dowladeed ee la yaqaanay ku soo xaroon jiray ee waxay ahaayeen kuwa Jeebabka lagu uruursado iyadoo markaa dowaladaha laga soo qaadayo loo sheegayey inaan Soomaaliya wali Bangi dhexe ka shaqo bilaabin, saas awgeed ayey gacmaha ugu qaadanayaan lacagta.
Waxaad ogtahay Sadaqadu iney meel kasta ku baxdo, sida uu Nabigu Naxariis iyo Nabad galyo korkiisa ha’ahaatee noo sheegay in (Beer kasta oo qooyan ay Saqadu ku baxdo) goorta aad Sadaqada la baxayso shardi uma’ahan in qofka aad wax siineyso aad isku koox tihiin, sidoo kale shardi uma’ahan inaad la dhacsan tahay waxa uu ku qabanayo lacagtaas, haddii aadan hubin inuu wax xaraam ah ku bixinayo, Culimadu waxay sheegaan iney xitaa Sadaqadu ku baxdo qofka Gaalka ah haddii uu ku noolaanayo, Xoolaha iyo wax kasta ayey Sadaqadu ku baxdaa.
Aniga oo halkaa ka duulaya waxaan maanta codsanayaa in Soomaalidu ay Sadaqo u uruuriyaan D.K.G. ah maxaayeelay waa dad Soomaaliyeed oo baahan, waa Siyaasiyiin waayey wixii ay Gaariga ku raaci lahaayeen, waa niman Magacii Soomaaliyeed ku soo celiyey Fagaara-yaasha dunida, waxay hadda awoodi waayeen iney iska bixiyaan Kirada Hoolashii ay ku shiri jireen, taas waxay marag-gal u tahay in saa soo kale ay ka haysato Guryaha ay dagan yihiin oo aysan Kiradii guryaha iska bixin noloshii qoyskoodana ay gabeen intii ay ku maqnaayeen Siyaasada D.K.G. ah, waxaad kaloo ogtihiin qaar badan oo ka tirsanaa D.K.G. ah iney Siyaasad ahaan u wareegeen Gurubyo kale oo col la’ah D.K.G. ah, maxaa keenay taasna?.
Codsi labaad waxaan u jeedinayaa maamulka Puntlaind iyo Somaliland oo iyagu ah maamullo si hagaasan u maamusha waxa ka soo gala Dakadaha,Garoomada iyo goobaha Canshuuraha iney waxa ku Sadaqaystaan waalahooda D.K.G. ah ee hadda tabaaleysan, waan hubaa haddii ay isku Siyaasad ahaan lahaayeen Bajadka soo gala ayey qayb u qoondeyn lahaayeen, ee bal markaan Sadaqo awgeed wax u siiyaa walaalihiina Soomaaliyeed ee dhaqaale xumidu soo wajahday.